Ambassador of Myanmar presents his Credentials to His Highness Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, the Emir of the State of Qatar – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
U Ko Ko Latt, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the State of Qatar, presented his Credentials to His Highness Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, the Emir of the State of Qatar on 28 October 2015, in Doha.
Dated.6November 2015
ကာတာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးကိုကိုလတ် သည် ၄င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ‌‌ေအာက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဒိုဟာမြို့၌ ကာတာနိုင်ငံအကြီးအကဲ ရှိတ်ခ် တာမင် ဘင် ဟာမက် အယ်လ် သာနီ ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နို၀င်ဘာလ ၆ ရက်